सपनामा मन्दिर गएको दृश्य देखेमा त्यसको अर्थ यस्तो हुन्छ… – Butwal Sandesh
सपनामा मन्दिर गएको दृश्य देखेमा त्यसको अर्थ यस्तो हुन्छ…
काठमाडौँ । वास्तवमा भन्नुपर्दा, ‘सपना’ भनेको हाम्रो अवचेतन मनमा भएका कुराहरूलाई हामीसामुन्ने देखाउने श्रोत हो भन्न सकिन्छ। हरेक संस्कृतिले ‘सपना’लाई भिन्नाभिन्नै दृश्टिकोणले हेर्ने गर्दछ भने हरेकले आफ्नै तरिकाले सपनालाई व्याख्या गर्ने गर्दछ। कसैले सपनालाई मानिसको मनोविज्ञान बुझ्ने माध्यमको रूपमा हेर्ने गर्दछन् भने कसैले यसलाई अलौकिक शक्तिको रूपमा पनि हेर्ने गर्दछन्।
त्यसैगरी, ‘मन्दिर गएको’ सपनालाई पनि थुप्रै दृश्टिकोणले हेर्न सकिन्छ साथै थुप्रै तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ। जानुहोस सपनामा ‘मन्दिर गएको’ देख्नुको खास अर्थ यस्तो हुन्छ ।
भाकल – यदि सपनामा मन्दिर गएको देखेमा मन्दिरको सपनालाई अलौकिक शक्ति र ‘भगवान’ले मानिससँग अन्तरक्रिया गर्न खोजिरहेको बुझिन्छ । भगवानले दिएको आशिर्वादको धन्यवाद दिन बाकीँ रहेको भन्ने बुझिन्छ । मन्दिर गएको सपना देखेमा केही भाकल छ भन्ने कुझिन्छ । त्यसपछि आफ्नो भाकल पुरा गर्न मन्दिर जानुपर्दछ ।
दिव्य आश्वासन – मन्दिरको सपना देख्दा कसैले तपाईँलाई आश्वासन दिइरहेको छ भन्ने पनि बुझिन्छ । तपाईले कसैको सहाराको आश गर्नुभएको छ भने पनि सपनामा मन्दिर देख्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी, साउन महिनामा नारीहरुले हरियो चुरा, मेहन्दी लगाउने चलन बढेको छ । यस महिनालाई शिवको महिना पनि भनिन्छ । यस महिनाको सोमबारको विशेष महत्व रहने गरेको छ । सोमवार पूजाआजा गर्ने, मठमन्दिर धाउने साथै व्रत बस्ने पनि चलन छ । अझ केहि मानिसहरु साउन महिनाभरी व्रत बस्ने गर्दछन् । तसर्थ यस महिनालाई व्रतको महिना पनि भनिन्छ ।
व्रत बस्ने बिभिन्न विधि र प्रकारहरु छन् । कोहि श्रावणको सोमबार मात्र व्रत बस्दछन् भने कोहि पुरा महिना व्रत बस्दछन् । व्रतका दिन कसैले निराहार बस्दछन् भने कोहि फलफूल वा मकैको भात खाने गर्दछन् । तर जे भएपनि व्रतका दिन अन्य दिन भन्दा शुद्ध र शाकाहारी मात्र खाने गरीन्छ ।
यस्ता छन्, व्रतका फाइदा
१. व्रत बस्दा खराब खानेकुरा अर्थात सडेको, गलेको, बासी, कुहिएको खानेकुरा खाइदैन ।
२. व्रतमा पचाउन गाह्रो हुने माछामासु खाइदैन जसका कारण स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ ।
३. व्रत बस्नेले शुद्ध र ताजा खानेकुरा मात्र खाने भएकाले यसले शरीरलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
४. व्रत बस्दा पाचनतन्त्रमा विश्राम पुग्नुको साथै अपच भएको पनि सफा हुन्छ ।
५. व्रतका क्रममा मानिस ध्यानमग्न हुने भएकाले मनस्थिीतिमा एकाग्रता आउँछ ।
अतः शरीरको विकार हटाउन र उर्जावान् बन्न पनि व्रतले फाइदा पुर्याउँछ । भगवानको आराधनामा ध्यान रहदाँ मानिसको विचलित मनमा शान्ती प्राप्त हुन्छ । व्रतले भगवान खुसी हुने मात्र होइन शरीर स्वस्थ्य, मन शुद्ध र सकारात्मक हुने गर्दछ ।